Firy taona i Undertaker? - Wwe
Firy taona i Undertaker?
The Undertaker dia WWE Superstar malaza iray izay mitazona ny firaketana indrindra amin'ny fandresena ao WrestleMania miaraka amina fandresena 24 ary fatiantoka 2 fotsiny. I Undertaker dia tsy tao anatin'ny WrestleMania 35 fa tonga niseho tamin'ny RAW taorian'ny WrestleMania.
Mark William Callaway, fantatra koa amin'ny hoe The Undertaker 54 taona . Teraka tamin'ny 24 martsa 1965. Izany no mahatonga azy ho iray amin'ireo Superstars tranainy indrindra izay mbola mifaninana amin'ny WWE.
Ny fisehoana farany an'ny Undertaker dia teo amin'ny RAW taorian'ny WrestleMania 35; na izany aza, ny lalao farany nataony dia tamin'ny Novambra 2018 rehefa nifaninana tamin'i Shawn Michaels sy ny ekipan'ny Triple H niaraka tamin'i Kane 'rahalahiny', tao amin'ny Crown Jewel PPV.
Tena mpirahalahy i Undertaker sy i Kane?
Tsia, i Undertaker sy i Kane dia tsy tena mpirahalahy. Izy roa dia tsy mifandraika amin'ny tena fiainana ary maneho fotsiny ny toetran'ny mpirahalahy ho an'ny WWE.
tsapako fa tsy tian'ny olona aho
Ny Undertaker dia tao anatin'ny WWE nandritra ny 20 taona mahery ary iray amin'ireo fanontaniana napetraka indrindra momba ny The Undertaker dia:
Firy taona izy?
ny fomba hanombohana taratasy ho an'ny olona iray tianao
Mahagaga izany Ilay Undertaker dia mbola afaka mifaninana amin'ity ambaratonga avo ity amin'ny faha-54 taonany. Na dia efa voalaza aza fa mety hisotro ronono amin'ny asany i The Undertaker, Tatitry ny Bleacher dia nanambara fa mety hiverina amin'ny fifaninanana am-perinasa izy amin'ny lalao amin'ny seho WWE Saudi Arabia manaraka.
Vakio ihany koa: Nolavin'i WWE ny tolo-kevitra lehibe nataon'i Undertaker
Ilay Undertaker nanomboka ny asany tamin'ny 1984 fa niditra tamin'ny WWE ihany tamin'ny 1991. Nanomboka tamin'ny WWE izy tamin'ny naha Undertaker azy tenany ary lasa nahomby teo amin'ny gimik Deadman.
Nahazo fahombiazana lehibe tao amin'ny WWE i Undertaker nandritra ny taona maro, ary nandrombaka ny fiadiana ny tompon-daka rehetra anisan'izany ny Tompondakan'ny WWE sy Tompondaka tamin'ny World Heavyweight nandritra ny fotoana maro.
inona no hatao raha ny solaitranao
Tsy fantatra mazava hoe mandra-pahoviana no hijanona ho mpifaninana mavitrika i Undertaker satria 53 taona ny vatany dia tsy maintsy mandray tolotra mavesatra izy.
vakio ny misimisy kokoa momba ny fisehoan'i Undertaker ao amin'ny RAW rehefa nifanehitra tamin'i Elià izy Eto .
maninona ny narcissist no te handratra anao
ny fomba tsy hahatezitra ny olon-tianao
Famantarana 27 mazava ho azy fa tiany ianao
ny fomba hampiarahana ny fiainanao amin'ny 20